कृष्ण शाह यात्री, (काठमाडौँ)
(रङ्गमञ्च एउटा आदिम प्रयोगशाला जस्तो देखिन्छ । मधुरो उज्यालोमा काला भित्ताहरूमा रगतका केही टाटा र वर्षौंदेखि सफा नगरिएको माकुराको जालो देखिन्छ । नेपथ्यबाट मानिस घुरीरहेको आवाज बेला बेलामा सुनिन्छ । प्रयोगशाला बाहिर एकजना पाले निस्फिक्री कुर्सीमा सुतिरहेको हुन्छ । व्यक्ति एक र व्यक्ति दुईले स्ट्रेचरमा शवलाई राखेर गुडाउँदै ल्याउँछ । पाले बेढङ्गसित उठ्छ । प्रयोगशालाको ढोका खोल्छ । स्टे«चरसहित त्यसमा सुतिरहेको मानिसलाई प्रयोगशालामा राखिन्छ ।)
एकः (पालेलाई) आज यसको पोष्टमार्टम आज हुँदैन । कुरा बुझ्नु भयो ?
पालेः बुझें । अनि कहिले हुन्छ त पोष्टमार्टम ?
एकः भोलि दिउँसो हुने संभावना छ ।
दुईः छक्क परेर रे ।
दुईः पुलिसलाई पनि यही कुरामा शङ्का लागेको छ । यो मानिस छक्क परेर मरेको हो वा कसैले यसलाई मारेको हो ? भन्ने कुरामा पुलिसले पोष्टमार्टम पश्चात थप छानबिन गर्नेछ ।
पालेः कस्तो अचम्म ? मानिस छक्क परेर पनि मर्दा रहेछन् ! खास के कुरा सुनेर छक्क परेका अर्थात् दिवंगत भएका रहेछन् ?
दुईः मुलुकमा यति छिटो संविधान आउँछ भन्ने सोचेकै रहेनछन् । टेलिभिजन हेरिरहेका थिए । पारित हुने वित्तिक्कै चोला उठेछ ।
पालेः त्यसो भए यो अपार सुखीका कारणले मरेको हुनु पर्छ ।
एकः अघोर दुःखीत भएर पनि मरेको हुन सक्छ ।
दुईः जे होस यो समग्रमा छक्क परेरै मरेको हो । सबैको यही निष्कर्ष रहेको छ ।
पालेः सबै ? सबै भन्नाले को ? क–कसले भन्यो नि तपाइलाई ?
दुईः कसैले भनेको होइन । सुनेको कुरा हो । परिवारका मानिसहरुले खासखुस कुराकानी गरिरहेको सुनेर थाहा पाएको हुँ ।
एकः अब हामी जानु पर्छ ।
पालेः कहाँ जानु हुन्छ ? एकछिन बसौ न । चुरोट पिउनुहुन्छ ?
एकः भो नखाऊँ होला ।
पालेः खाऊँ न खाऊँ । मसँग मार्लबोरो चुरोट छ । अमेरिकाबाट फर्किनु भएको शर्मा डाक्टरसा’बले आजै मात्र दिनु भएको हो ।
एकः हो र ? त्यसो भए त चिया पिउँदै खान पाए झनै काइदा हुन्थ्यो ।
पालेः म पनि एकछिन बाहिर जान्छु । भोक लागिरहेको छ । क्यान्टिनमा खानेकुरा खाएर आउनु पर्ला ।
दुईः लौ । हिड्नूस् न त ।
एकः तर फेरि यहाँ कोही नदेखेर डाक्टरसा’ब रिसाउनु हुने हो कि ?
पालेः मरिसकेकाहरू भाग्ने हैनन् क्या रे ! यीनलाई यहाँ कुनै कुकुर, गिद्धले पनि खान सक्तैन । एकैछिन बसेर गफगाफ गरेर आईहालिन्छ नि ।
दुईः लौ त लौ । जाऊँ न त ।
(व्यक्ति एक र व्यक्ति दुईसँगै पालेको प्रस्थान हुन्छ । रङ्गमञ्चमा एकछिन शून्यता छाउँछ । स्टे«चरमा राखिएको शवमा उज्यालो केन्द्रित हुन्छ । हावाको ठूलो झोक्का चल्छ । शवलाई ढाकिएको कपडा उडाउँछ । यतिबेला शवको अनुहार पढ्न सकिन्छ । युगीन छक्कको सङ्केत मिल्छ । विस्तारै शवपछाडिबाट चार ओटा आकृतिहरू विभिन्न हाऊभाऊ गर्दै निस्कन्छन् । यी सबैको अनुहार काटिकुटी मिल्छ । अझ अचम्मको कुरा सबैको अनुहार शवको अनुहारसँग मिल्छ । चारै आकृतिको वेषभूषा भने फरक–फरक हुन्छ । उनीहरू केही बेर तटस्थ मुद्रामा उभिन्छन् । लगत्तै मञ्चको अघिल्तिर गई एक मीनेट मौन धारण गर्छन् । त्यसपछि सबैले शवलाई चारैतिरबाट हेर्न थाल्छन् । घेर्न थाल्छन् । एउटा आकृतिले शवलाई छुन खोज्छ ।)
आकृति एकः पर्खनूस् ! (शव छुन लागेको आकृति अडिन्छ) तपाइले यसरी आफुखुसी मेरो शव छुन पाउनुहुन्न ।
आकृति दुईः तपाइको शव ? नचाहिदो कुरा नगर्नुस् महाशय ! यो मेरो शव हो । आज बिहानै मात्र मेरो मृत्यु भएको हो । म मेरो शवको अवस्था बुझ्न पछ्याउँदै यहाँ आइपुगेको हुँ । मलाई मेरो शव छुन मन लागेको छ । तपाइ शायद यो शवघरको पाले हुनुहुन्छ ।
आकृति एकः म पाले पहरे कोही पनि हैन । बरु यस्तो संवेदनाको घडीमा जिस्कने काम नगर्नुस् न । यो मेरो शव हो ।
आकृति दुईः म जिस्किने मुडमा छैन महाशय ! यो मेरै शव हो । नपत्याए यी हेर्नूस् त मेरो अनुहार यो शवसँग काटिकुटी मिल्छ ।
आकृति एकः मेरो अनुहार पनि मिल्छ । तपाइसँग अरु के प्रमाण छ ? यो शव तपाइको हो भनेर ?
आकृति दुईः तपाइसँग चाहि अरु के प्रमाण छ यो शव तपाइको हो भनेर ?
आकृति एकः मसँग ? आत्मासँग के हुन्छ ? मलाई यो शवको सम्पूर्ण अतित थाहा छ ।
आकृति दुईः अतित त मलाई पनि थाहा छ महाशय । अलि बलियो प्रमाण भए भन्नूस् । नत्र आफ्नो बाटो लाग्नूस् । मलाई मेरो शवको अघिल्तिर बसेर केही बेर शोक मनाउन दिनूस् ।
आकृति तीनः (आपत्ति जनाउँदै) एकछिन ! एकछिन पर्खनूस् ! तपाइहरु यो कस्तो वाहियात कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ? (ठूलो स्वरमा) हेर्नूस् ! मेरो जस्तो अनुहार भएको यो शव मेरो हो । मेरो शवलाई कसैले दाबी गरेको मलाई मन पर्दैन ।
आकृति एकः लौ यस्तो पनि हुन्छ ? शवको वास्तविक हकदार मै हुँ ।
आकृति तीनः होइन । मृत्युपछि पनि यस्तो झमेला आउला भनेर मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिइन । हेर्नुस् तपाइहरुसँग मेरो कुनै शत्रुता छैन । किन तपाइहरु व्यर्थमा मेरो शवमाथी आफ्नो हकदाबी गर्नु हुन्छ ।
आकृति एकः यो शव तपाइको हुँदै होइन ।
आकृति तीनः तपाइ कसरी यो कुरा किटानीका साथ भन्न सक्नुहुन्छ ?
आकृति एकः किनकी मैले अघि नै भनिसकें नि । यो मेरै शव हो भनेर ।
आकृति तीनः उफ् ! उफ् ! उफ् !
आकृति दुईः उफ् ! उफ् !
आकृति एकः उफ् !
(एकछिन मौनता छाउँछ । आकृति एक, आकृति दुई र आकृति तीनले टाढैबाट आफ्ना शव हेर्दै सुक्क सुक्क रुन थाल्छन् ।)
आकृति चारः यसरी नरुनोस् महाशय ! तपाइहरूलाई ठूलो भ्रम पर्न गएको छ । वास्तवमा यो मेरो शव हो । म अघिदेखि तपाइहरु सबैको कुरा सुनिरहेको थिएँ । यो मेरो शव हो ।
आकृति दुईः (रिसाउँदै) लौ ! लौ ! फेरि अर्को दाबेदार थपियो । हुँदा–हुँदा अब मेरो शवमाथी तीन–तीन जनाको दाबी ? तपाइहरु किन मेरो कुरा बुझ्नु हुन्न ?
आकृति एकः (रिसाउँदै) यो त अति नै भयो । यसरी सबैले एउटै शव दाबी गर्न मिल्दैन । मैले सबैभन्दा पहिला देखेको हुँ । त्यसकारण यो शव मेरो हो ।
आकृति दुईः तपाइभन्दा अघि मैले देखिसकेको थिएँ । त्यसैले मैले छुन लाग्दा तपाइले रोक्नु भयो । बरु यसमा मेरो हक लाग्छ ।
आकृति तीनः यसरी झगडा नगरौं । बरु पहिला एक आपसमा परिचय गरौं । अनि प्रमाण र तर्क पु¥याएर शवलाई जिम्मा लिऊँ । शव बोल्न पनि सक्तैन । कि कसो ?
आकृति एकः तपाइको कुरा मलाई ठिक लाग्यो । म सहमत छु । (बाँकीसँग) अनि तपाइहरु के भन्नु हुन्छ ?
आकृति चारः अब उपाय नै के रह्यो र ? यो त बाँच्नको लागि गरिने संघर्षभन्दा पनि कठिन भयो । पहिला तपाइबाटै परिचय गरौं ।
आकृति एकः हुन्छ । सुरु गरौं । अन्त्यबाट गर्दा पनि हुन्छ ।
आकृति चारः म अस्तित्व नेपाली हुँ ।
आकृति तीनः मेरो नाम अस्तित्व नेपाली हो ।
आकृति दुईः मलाई अस्तित्व नेपाली भन्छन् सबैले ।
आकृति एकः म हुँ अस्तित्व नेपाली ।
आकृति चारः लौ । हामी सबैको अनुहार मात्र नभई नाम पनि मिल्ने रहेछ । यो मुद्दा त झन् जटिल हुने भयो । थप परिचय दिऊँ सबैले ।
आकृति दुईः म एक पिता हुँ ।
आकृति चारः म एक पुत्र हुँ ।
आकृति एकः म एक पति हुँ ।
आकृति तीनः अनि म एक प्रेमी हुँ ।
(आकृति एक मञ्चको अग्र भागमा आउँछ । ऊ निकै चिन्तित मुद्रामा हुन्छ ।)
आकृति एकः म माथी आज ठूलो बज्रपात आइपरेको छ । मैले जीवनमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी थियो । त्यो पुरा गर्नै नपाइ आज मेरो मृत्यु भयो ।
आकृति दुईः भनेपछि तपाइ आफ्नो मृत्यु भइसकेको कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? तपाईलाई अलिकति पनि अविस्वास लागिरहेको छैन ? तपाईले अहिले कुनै भयानक सपना देखिरहनु भएको पनि त हुन सक्छ ।
आकृति एकः होइन मेरो मृत्यु भइसकेको कुरामा मलाई अब कुनै शङ्का छैन ।
आकृति दुईः नाटक अगाडी बढाऊँ त्यसो भए ।
आकृति एकः कस्तो नाटक ?
आकृति दुईः मृत्युको नाटक ! जसको सूत्रधार तपाइ आफै हुनुहुन्छ ।
आकृति एकः (पीडास्वर) मैले जीवनभरी मेरो खुसीलाई मात्र प्राथमिकता दिएँ । विद्यार्थी छँदा पढाईलाई, त्यसपछि आफ्नो जागिरलाई अनि विवाह भएपछि घरबाहिरको रसरङलाई । मेरी पत्नीलाई मैले मन पराएर विहे गरेको होइन । परिवारले कलिलो उमेरमा नै मेरो मागी विवाह गरीदिएका थिए । म कसैलाई लामो समय प्रेम गरेर मात्र विवाह गर्न चाहन्थें ।
आकृति दुईः अर्थात् भनौ तपाई पति भएर प्रेमीको सपना देखिरहनुहुन्थ्यो ।
आकृति एकः म प्रेम विवाह गर्न चाहन्थें ।
आकृति दुईः तपाइ विवाह गरेर पनि प्रेम गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।
आकृति एकः यो तपाइको विचार हो । म यो कुरा सोच्न पनि सक्दिन । मेरो जीवनमा मेरी पत्नीको कुनै ठाउँ थिएन । सोचेजस्तो नभएकोले मैले पत्नीलाई कहिल्यै पत्नीको दर्जा दिइन ।
आकृति दुईः दर्जा दिईनको अर्थ धेरै हुन्छ महाशय ! घुमाउरो कुरा गरेर हाम्रो महत्वपूर्ण समय खेर नफल्नूस् !
आकृति एकः दर्जा दिइन भन्नुको मतलव कतै घुमाउन लगिन । कहिल्यै सन्चो, बिसन्चो सोधिन । पत्नीलाई पटक्कै मतलव गरिन । मैले सधैं आफू र आफ्नो स्वार्थलाई मात्र महत्व दिएँ । बुझ्नु भयो ?
आकृति दुईः बुझ्दैछु ।
आकृति एकः (रसिक बन्दै) म सुरा र सुन्दरीको भने शौखिन थिएँ । हरेक देशमा बनेको रक्सी सङ्कलन गर्ने र निस्फिक्री पिउने मेरो शोख थियो । यसैमा मैले कमाएजति सम्पत्ति उडाएँ । (रोकिएर) गत वर्ष अचानक म बिरामी परें । डाक्टरलाई देखाउँदा मेरो दुवै मृगौला काम नलाग्ने भएको रिपोर्ट आयो । त्यसपछि मेरो होसहवास उड्यो । मैले धेरै ठाउँमा देखाएँ । मलाई मिल्ने मृगौला कतैबाट पाउन सकिन । अन्त्यमा मेरी पत्नीको मृगौला मलाई प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने भयो । मलाई एउटा किड्नी दिएर मेरी पत्नीले नयाँ जीवन दिइन् ।
(शून्यता छाउँछ । कोही बोल्दैनन् । बाहिर पानी पर्न थालेको आवाज आउँछ । टाढाबाट मानिसहरूको मिहिन स्वर सुनिन्छ । आकृतिहरू सतर्क बन्छन् । आकृति एक शवको नजिक जान्छ ।)
आकृति चारः त्यसपछि के भयो ?
आकृति एकः त्यसदिनदेखि मलाई भयानक पीडा बोध भइरहेको छ । मैले जसलाई जीवनभरी घृणा गरें उनैले मलाई आफुलाई भन्दा बढी माया गरेर मलाई बचाएकी थिईन् । मेरी पत्नीले एक निमेषमा मेरो सबै अहम तोडिदिएकी थिइन् । अनि बल्ल मेरो होस् खुल्यो । तर हिजो टेलिभिजन हेर्दाहेर्दै अचानक मेरो निधन भयो । मलाई त्यसबेला हर्ट अट्याक भएको थियो जस्तो लाग्छ ।
आकृति दुईः यस मृत्युसँग म पहिलेदेखि नै परिचित छु जस्तो लागिरहेको छ यतिबेला ।
आकृति चारः मलाई पनि टाउकोमा करेन्ट लागेजस्तो भयो ।
आकृति तीनः केही कुराको सम्झना मलाई पनि भइरहेको छ । तर म पति होइन प्रेमी हुँ । मेरो बाटो फरक छ । तपाइ आफ्नो कुरा भन्नूस् । यसरी कथालाई रोक्दा अर्को दुर्घटना हुन सक्छ ।
आकृति एकः (हिड्दै) मेरो मृत्यु हुनुभन्दा पहिले मेरी जीवनसँगीलाई एकपटक विश्वका केही सुन्दर ठाउँहरु घुमाउने धोको जागेको थियो । घुमाउन लाने बाचा समेत गरीसकेको थिएँ तर त्यो सबै पुरा नभई मेरो असामयिक निधन भयो । अहिले मलाई मेरो मृत्युमा भन्दा पनि मेरो त्यो अपुरो काम सम्झेर पीडा भइरहेको छ । यस्तो दुःखको बेला तपाइहरु अझ मेरो शवमाथी हकदाबी गरेर मलाई किन अझ दुःखित तुल्याउनुहुन्छ ? मलाई धक फुकाएर रुन दिनोस् । बिन्ति छ तपाइहरुलाई ।
आकृति चारः तपाई केही बेर रुन सक्नुहुन्छ महाशय ! तर मेरो पनि कथा सुन्नु पर्छ सबैले । म पनि तपाइभन्दा कम्ति दुःखित छैन मेरो मृत्युमा ।
आकृति तीनः हुन्छ । भन्नूस् ।
(आकृति तीन शवको नजिक जान्छ । निकै बेर घुरेर हेर्छ । अनि बोल्न थाल्छ ।)
आकृति चारः म एक पुत्र हुँ । मेरो जन्म एक सम्पन्न परिवारमा भएको थियो । मेरो नाम अस्तित्व राखिएको थियो । सन्तान ढिला जन्मिएकोले म नबिग्रियो् भनेर आमाबाले मलाई सानैदेखि आफुभन्दा धेरै टाढा स्कुलको छात्रबासमा राखिदिनु भएको थियो । मलाई त्यस छात्रबासमा खुबै डर लाग्थ्यो ‘होस्टल बार्डेन’ र केही बदबास केटाहरुदेखि । उनीहरु मलाई खुबै सताउँथे । म यो कुरा बालाई भन्थे र घर बसेर पढ्छु भनी रोइकराई गथें । मेरो कुराको सुनुवाइ हुँदैनथ्यो ।
आकृति तीनः तपाइ त्यस छात्रबासबाट भाग्नु भएन ?
आकृति चारः यस्तो अवसर कहिल्यै आएन । लामो समय मैले त्यही अघोषित् यातनागृहमा बसेर पढ्नु प¥यो । मलाई आफुदेखि टाढा राखेर पढाउने आमाबाप्रति बिस्तारै मेरो रुची र माया घट्दै गयो । म एकलकाँटे र स्वार्थी बन्दै गएँ । मैले सबैभन्दा बढी आफुलाई माया गर्न थालें । त्यसपछि मैले आमाबालाई कहिल्यै एक असल पुत्रका दृष्टिले हेरिन । बुढेसकालमा उनीहरू तिर्थाटन लगिदिन भन्थे । म सुने पनि नसुनेझैं गर्थें । मलाई घरपरिवारसँग कुनै सहानूभूति र लगाव थिएन । त्यसैले एकदिन मैले उपाय निकालें । आमाबालाई मैले वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिएँ । सहरको एउटा नाम चलेको वृद्धाश्रममा उनीहरुलाई राखेको थिएँ । उनीहरुले पनि त मलाई छात्रबासमा राखेका थिए । मैले पनि उनीहरुलाई वृद्धाश्रममा लगेर राखिदिएँ । यस कुराको मलाई रत्तीभर पछुतो थिएन । अचानक एकदिन वृद्धाश्रमबाट फोन आयो ।
(आकृति चार बोल्दाबोल्दै भक्कानिएर रुन थाल्छ । केही बेर रोइ नै रहन्छ ।)
आकृति तीनः के भयो महाशय ! भन्नूस् सबैकुरा । भन्यो भने मन हलुङ्गो हुन्छ । वृद्धाश्रमबाट कस्तो खाले फोन आएको थियो ?
आकृति चारः (बिस्तारै सानो स्वरमा) बुढाबुढीहरूले आत्महत्या गरेछन् । मर्नु अघि मेरो नाममा चिठि लेखेर छाडी गएका रहेछन् । मैले त्यो चिठि खोलेर हेरें । त्यसमा के लेखिएको थियो भने ... के लेखिएको थियो भने ... (बोल्दाबोल्दै फेरी डाँको छोडेर रुन थाल्छ)
आकृति तीनः आफुलाई सम्हाल्नूस् महाशय ! त्यस सुसाइड नोटमा के लेखिएको रहेछ । हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ ?
आकृति चारः (सम्हालिदै) म भन्छु । मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ । त्यस पत्रमा मेरो आमाबा दुवैको हस्ताक्षर थियो । पत्रमा लेखिएको मेरा आमाबाको भनाइ अनुसार म त अनाथालयबाट ल्याइएको एक अनाथ रहेछु । ती आमाबाले आफ्नो कुनै सन्तान नभएकोले मलाई अनाथालयबाट घर ल्याउनु भएको रहेछ । उहाँहरुले मलाई कहिल्यै कुनै कुराको कमी हुन दिनु भएन । म उहाँहरुको आफ्नै रगत होइन भन्ने कुराको भानसम्म पर्न दिनु भएन । जतिबेला मैले यो कुरा थाहा पाएँ । उहाँहरु यो संसारबाट गइसक्नुभएको थियो । त्यतिबेला म जस्तो कृतघ्न मानिस कोही छैन होला जस्तो लागेर मेरो मुटु भत्भती पोल्न थाल्यो । छात्रबासमा राख्नु मेरै हितको लागि थियो भन्ने कुरा मैले बुझ्न सकिन । मैले यसको बदला लिन ती महामानवहरुलाई वृद्धाश्रममा लगेर राखें । यस कुराले म खुबै विचलित भएँ ।
आकृति तीनः तपाइको कथा मैले पहिले पनि सुनिसकेको, पढिसकेको वा आफैले भोगिसकेको जस्तो लाग्छ ।
आकृति एकः मलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ ।
आकृति दुईः मलाई पनि केही कुराको सम्झना भइरहेको छ । तर यतिबेला मलाई पुत्र होइन पिताको भूमिका बढी याद आइरहेको छ । त्यसपछि के भयो भन्नूस् त ।
आकृति चारः त्यसपछि म विरामी परें । वास्तवमा म जीवनदेखि थाकिसकेको थिएँ । मलाई एक असल पुत्र हुन नसकेकोमा ठूलो ग्लानीबोध भइरहेको थियो । हिजो निकै तनाव भएर अल्कोहल बढी नै पिएछु । राती टेलिभिजन हेर्दा हेर्दै मेरो मृत्यु भएछ । तपाइहरु नै भन्नूस् त, मरिसकेपछि अब म आफैलाई के सजाय दिऊँ ? मेरो कृतघ्न शरीरलाई म अब यहाँ डाक्टरहरुले टुक्राटुक्रा पारेको हेरेर पश्चाताप गर्न चाहन्छु । त्यसैले यो मेरो शव भएको ठाउँमा म आएको हुँ । बिन्ति छ मलाई मेरो अन्तिम इच्छा पुरा गर्न दिनुहोस् ।
आकृति तीनः हतार नगर्नुस् महाशय ! दुई जनाको कुरा सुनिसकेपछि मेरो कुरा पनि सुनिदिनुस् । त्यसपछि जे जस्तो निर्णय हुन्छ । म मान्न तयार छु ।
आकृति दुईः भन्नूस् । भन्नूस् । तपाइले मात्र नभई नभई मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने हक लाग्छ । पहिला तपाइ नै भन्नूस् ।
आकृति तीनः यो मेरो शव हो भन्नुको एउटै कारण छ । मैले यो शवको जिवित शरीरसँग धेरै खेलवाड गरें । मैले अघि नै भनिसकें, म एक असफल प्रेमी हुँ भनेर ।
आकृति एकः हुँ होइन थिएँ भन्नूस् महाशय यदि तपाइको मृत्यु भइसकेको हो भने ...
आकृति तीनः धन्यवाद तपाइलाई ! म एक खराब प्रेमी नै थिएँ । अझ भनौं प्रेमको नाममा म कलङ्क थिएँ । मेरो जीवनकालमा एकैपटक दशौंजनासम्मसँग सम्बन्ध राखें । सबैलाई प्रेमको नाटक गरी रहें अनि उनीहरुको देहलाई भोगीरहें । यो कुरा मेरो घरपरिवारलाई थाहा थियो । मेरी पत्नी, आमाबुबा र मेरा छोराछोरीलाई समेत थाहा भइसकेको थियो । त्यसैले उनीहरु मलाई घृणा गर्थे । मेरो घर, परिवारमा कसैसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यसैले म सधैं–सधैं नयाँ सम्बन्धको खोजीमा हुन्थें ।
आकृति एकः क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ ! रुचीकर रहेछ तपाइको आत्मकथा ! अगाडी बढौं ।
आकृति तीनः धन्यवाद महाशय ! मैले जीवनमा धेरैलाई मन पराएँ । धेरैको जीवन बिगारें पनि । म एकजनाको प्रेममा मात्र रमाउने मानिस थिइन । तर जीवनको उत्तराद्र्धमा आइपुगेपछि मलाई आफैदेखि घृणा लाग्न थाल्यो । मैले जानाजानी सबैलाई धोका दिइरहेको थिएँ । विशेषगरी ती महिलाहरु जो मेरो एक इशारामा मसँग जीवन विताउने सपना देख्दै दौडिदै आइपुग्थे । उनीहरुलाई पनि मैले अन्याय गरें । म एक असल पति थिइन । म एक असल पुत्र पनि थिईन । म एक असल प्रेमी पनि बन्न सकिन । मान्छेको यति ठूलो विद्रुप अनुहार मैले देखेको थिइन । मलाई आफ्नै अनुहारदेखि केही दिनदेखि डर लाग्न थालेको थियो । मैले ऐना नहेरेको पनि महिना दिन हुन लागेको थियो । हजामकोमा जाँदा ऐना छोपेर दाह्री काट्न लगाउँथें । म अर्धपागल जस्तो बनेको थिएँ । मलाई यो जीवनदेखि वाक्क लागेको थियो । त्यसैले विभिन्न सहरमा मानिसहरु आन्दोलनमा भटाभट मरीरहेको देखेर मलाइ पनि मर्न मन लाग्यो । उनीहरु देशका निम्ति मरिरहेका थिए । म मेरै निम्ति मरें । फरक यति हो । अहिले मेरो शव मेरो आँखा अगाडी छ । म मेरो मृत्युमा अब खुसी मनाऊँ कि दुःख मनाऊँ ? म अन्योलमा छु । (शव छुन खोज्छ । छुँदैन । एकोहोरो हेरि मात्र रहन्छ ।)
आकृति दुईः पीडा उस्तै हो । हामी पात्र मात्र फरक हौं । आवरण मात्र फरक हो । मान्छे भएर जन्मिसकेपछि हरेक भूमिका गर्नु पर्ने रहेछ । म पनि एउटा भूमिकामा थिएँ ।
आकृति एकः कस्तो भूमिकामा ?
आकृति दुईः पिताको भूमिकामा । म पनि आदर्श पुत्र थिइन । न त म उत्तम पति नै थिएँ । म महान प्रेमी पनि बन्न सकिन । न त असल पिता नै बन्न सकें ।
आकृति एकः हुन सक्छ ।
आकृति चारः अनि तपाइ के भन्न चाहनु हुन्छ अब ?
आकृति दुईः म यति मात्र भन्न चाहन्छु । तपाइहरु सबैले भन्नु भएको कथा मेरो पनि साझा आत्मकथा हो । हामी सबै एउटै मानिसका फरक फरक व्यक्तित्व हौ । मलाई अरु भूमिकाले भन्दा पनि एक खराब पिता बन्नु परेकोमा पश्चात्ताप लागिरहेको छ । आफ्नो सन्तानहरुलाई मैले कहिल्यै समय दिइन । उनीहरुलाई म मन पराउँथें तर मैले कहिल्यै उनीहरुसँग मिठो वचनले बोलिन । म सधैं आफ्नै काममा व्यस्त भएँ । रमाएँ । विशेषगरी जीवनभरी मैले घृणा गरेको मेरी पत्नीले मृगौला दान दिएर मलाई बचाएपछि, मेरो आम्दानीको स्रोत सुक्दै गएको थाहा पाएर रगत पिएर ढाडिएको जुकाले झैं मेरा कथित प्रेमिकाहरुले मलाई छाडेपछि र वृद्धाश्रमबाट आमाबाले लेखेको सुसाइड नोटबाट म एक अनाथ हुँ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि ... म मान्छे रहिन । मैले मान्छे हुनुको न्युनतम योग्यता समेत गुमाइसकेको थिएँ । मैले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्झिएँ त्यसपछि । म एक अनाथ भएर पनि मैले असल पिता पाएको थिएँ । मेरा छोराछारी अनाथ थिएनन् तर उनीहरुले पिताको अनूभूति कहिल्यै गर्न पाएनन् । त्यसैले मैले घर परिवार र छोराछोरीलाई अब समय दिने सोच बनाएको थिएँ । मेरो स्वाभाव र व्यवहार पनि बदलिदै गएको थियो । तर अचानक मेरो मृत्यु भयो । म एक अभागी पिता हुँ जो यतिबेला आफ्नै शव हेरेर टुलुटुलु बस्नु परिरहेको छ ।
(सबै मुखामुख गर्छन् । मुर्दा शून्यता छाउँछ । एकछिनपछि हावा, हुरी चल्न थाल्छ । चारै आकृतिहरूलाई हावाले उडाउला झै गर्छ । हुरी रोकिन्छ । स्ट्रेचरबाट शव विस्तारै उठ्छ । आकृतिहरू डराउँछन् । शव रङ्गमञ्चको मध्यभागमा जान्छ । प्रकाश शवमाथी मात्र केन्द्रित हुन्छ ।)
आकृति एकः मेरो शव हिड्न थाल्यो !
आकृति दुईः मेरो शव हिड्न थाल्यो !
आकृति तीनः मेरो शव हिड्न थाल्यो !
आकृति चारः मेरो शव हिड्न थाल्यो !
(शव रङ्गमञ्चबाट बाहिरिन थाल्छ । नेपथ्यमा शान्तिको मन्त्रोच्चारण हुन थाल्छ । “असतो मा सद्गमय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।।”)
आकृति एकः शायद अब मेरो महाप्रस्थान हुने बेला भयो ।
आकृति दुईः शायद अब मेरो पनि महाप्रस्थान हुने बेला भयो ।
आकृति तीनः शायद अब म पनि महाप्रस्थान गर्नेछु ।
आकृति चारः शायद अब मेरो पनि महाप्रस्थान हुनेछ ।
(शव रङ्गमञ्चबाट बाहिरिन्छ । आकृतिहरू पनि एक–एक गर्दै शवसँगै बाहिरिन्छन् । पालेको प्रवेश हुन्छ । शवघरमा खाली स्ट्रेचर देखेर पाले झस्किन्छ । उसले चारैतिर शव खोज्छ । कतै पनि भेट्दैन । ऊ बोल्न खोज्छ तर ऊको आवाज निस्कदैन । रङ्गमञ्चको प्रकाश एक्कासी निभ्छ ।)
पोष्ट बक्स नं. २३३४४, काठमाडौं
इमेल – krishnayatri@gmail.com